Izitshalo ze-aquarium | Okwezinhlanzi
I-Las izitshalo ze-aquarium Ziyinto eyodwa yokuhlobisa okufanele siyicabangele. Ikakhulukazi uma sifuna ukuwabeka ku-aquarium yethu, ngoba kufanele sazi imininingwane kwesinye isikhathi enganakwa futhi engakucindezela kakhulu ukuzinza kwe-aquarium yethu.
Futhi yilokho izitshalo ze-aquarium zingaba umlingani noma isithaKwezinye izimo, kufanele silandele inqubo yokuzivumelanisa ne-aquarium yethu, ukuze singangcolisi amanzi futhi sisinike izinkinga.
Kulesi sikhala uzothola, izinhlobo zezitshalo, amathiphu okwethulwa ku-aquarium yethu nemininingwane engapheli yokuzijabulela ngokugcwele ekhaya lethu nokuthi izinhlanzi zethu zizizwa zikhululekile e-aquarium yazo. Kubalulekile ukunaka yonke imininingwane yokunakekela izilwane zethu.
Por IsiJalimane Portillo kwenza iminyaka 3 .
Uma une-aquarium kufanele unqume ukuthi iziphi izitshalo ozozibeka zombili ngobuhle bazo futhi ...
Por IsiJalimane Portillo kwenza iminyaka 4 .
Kuma-athikili adlule sibheke ulwelwe olubomvu ngokujulile. Namuhla sikulethela esinye isihloko esihlobene naso. Esimweni esinjalo…
Namuhla sizokhuluma ngesitshalo esisetshenziswa kakhulu ezindaweni zasemanzini. Yi-Java moss. Igama lakho…
Ukuhlobisa nokwakha indawo yokuhlala izinhlanzi zethu singasebenzisa izitshalo zokufakelwa nezemvelo. Ngo…
Substrate yezitshalo ze-aquarium
Izitshalo zasemanzini zingaphezu nje kokuhlobisa. Zingabantu abaphilayo futhi ngenxa yalokho zidinga ezinye ...
Izitshalo ezintantayo zama-aquariums
Izitshalo ezintantayo, ngaphandle kokuhlobisa ngaphakathi emanzini, zinganikeza nokudla ezinye izinhlobo zezinhlanzi ...
Izitshalo Zasemanzini ku-Aquarium yethu
Por UViviana Saldarriaga kwenza iminyaka 10 .
Ezindaweni eziningi zasemanzini engizibonile empilweni yami, izitshalo zasemanzini ezihlala ngaphakathi kuwo, zine ...